Ciidamada amaanka oo Howlgalo Dad lagu qabtay ka sameeyay Degmada yaaqshiid.DAAWO – Radio Muqdisho
Ciidamada Booliska iyo Nabad sugida Qaranka Soomaaliyeed oo ay wehliyaaan Ciidanka Booliska AMISOM ayaa Maanta waxaa ay Howlgalo Dad lagu soo qab qabtay ka sameeyeen Xaafado ka tirsan Degmada Yaaqshiid Ee Gobolka Banaadir iyo Taliska Yaaqshiidna uu ka warbixiyay Howlgaladaas.
Ciidamada is garabsanaya ayaa waxaa Xaafadaha ay Howlgalada ka sameeyeen ka mid ah Xaafada Towfiiq Ee Degmada Yaaqshiid Halkaas oo Ciidanku ay baarayaeen Xaafadaha Gaadiidka Dasdweynaha iyo shacabka Wadooyinka Maraya waxaana la qabtay dad lagu tuhunsan yahay in ay ka tirsanyihiin Kooxaha Nabaddiidka ah.
Ciidamada ayaa intii ay Howlgalkaas wadeen waxaa ay qabteen dad badan in kastoo Markii dambe ay Badankooda sii daayeen waxaana Gacanta Ciidanka ku jira 7 Ruux oo baaritaan u dhiman yahay sida ay saraakiisha Howlgalka waday u sheegeen Warbaahinta qaranka Soomaaliyeed.
Gaashaanle Dhexe Maxamed Yuusuf Nuur Taliyaha Saldhiga Booliska Degmada Yaaqshiid oo Saxaafada kula hadlay Isgooska Miisaanka Dhuxusha ayaa waxaa uu sheegay in Howlgalkani uu qayb ka yahay Howlgalo is daba joog ah oo Dhawaanahaanba ay wadeen Ciidamada amaanka Soomaaliyeed uuna sii socon doono waxaana bar bar socday Howlgalkaas Layrarka Cadceeda ku shaqeeya oo Wadada Warshadaha la galinayay.
DAAWO-Maxkamada Ciidanka qalabka sida oo Xukuno ku riday rag ka tirsanaa kooxda Al shabaab